Laser Marking Software EZCAD, Onye njikwa, Galvo Scanner Head - JCZ
ezcad2 na ezcad3 bụ sọftụwia dị iche iche maka ụdị ọrụ nhazi laser yana igwe nyocha galvo. dakọtara na ọtụtụ ụdị laser na galvo n'ahịa ma ọ dị mfe ịrụ ọrụ.
LMC na DLC2 laser njikwa na-arụ ọrụ na ezcad software, ike ịchịkwa ọtụtụ ụdị nke laser (FIBER, CO2, UV, Green ...) na galvo nyocha (XY2-100, sl2-100 ...) na ahịa.
Dị iche iche nhọrọ 2 axis na 3 axis laser galvo nyocha dị, site na stanard nkenke na ultra nkenke na ọkọlọtọ ọsọ na utrl-elu speed.customization availble nakwa.
Anyị na-enye nso nke laser optic imewe na n'ichepụta dị ka F-theta scan lens, doo expander, na-elekwasị anya oghere na iche iche nke mkpuchi na ihe onwunwe.
Anyị na-eweta isi iyi laser a pụrụ ịdabere na ya, nke emere na china ma ọ bụ mba ndị ọzọ yana ihe ndị ọzọ dị ka ngwugwu laser, yana ọnụahịa asọmpi.
Anyị na-arụpụta igwe nhazi laser maka ịgbado ọkụ, igbutu, ihe ndozi mmegide, ịgbachi ... ma igwe eji arụ ọrụ ma ahaziri.
Gịnị kpatara JCZ
Ogo, arụmọrụ, ụgwọ ọrụ na ọrụ.
Ahụmahụ 16 afọ na mpaghara laser na-eme JCZ ọ bụghị naanị na ụlọ ọrụ na-eduzi ụwa na-emepe ma na-arụpụta njikwa laser na ngwaahịa nnyefe metụtara ngwaahịa kamakwa onye na-azụ ahịa a pụrụ ịdabere na ya maka akụkụ dị iche iche metụtara laser na akụrụngwa mepụtara ma mepụta ya n'onwe ya, nọ n'okpuru, ijide, nye ulo oru ndi ulo oru ego na ndi ozo
Laser Galvo nyocha
Ejiri EZCAD2 laser software na 2004, afọ mgbe e hiwere JCZ. Mgbe afọ 16 gara aga, ugbu a ọ nọ n'ọkwá na-eduga na ụlọ ọrụ akara laser, na-arụ ọrụ dị ike na nkwụsi ike dị elu. Ọ na-arụ ọrụ na LMC usoro laser njikwa. Na China, ihe karịrị 90% nke igwe laser na EZCAD2 dị, yana mba ofesi, oke ahịa ya na-eto oke ọsọ. Pịa ka ịlele nkọwa ndị ọzọ gbasara EZCAD2.
Emeputara ngwanrọ EZCAD3 laser na 2015, ketara ọtụtụ ọrụ na atụmatụ Ezcad2. Ọ dị na ngwanrọ dị elu (dị ka kernel 64 software na ọrụ 3D) na njikwa laser (nke kwekọrọ na ụdị laser na galvo nyocha). Ndị injinia JCZ na-elekwasị anya na EZCAD3 ugbu a, n'ọdịnihu dị nso, ọ ga-anọchi EZCAD2 ka ọ bụrụ otu n'ime sọftụwia kachasị ewu ewu maka nhazi laser galvo dị ka 2D na 3D laser marking, ịgbado ọkụ laser, ịchacha laser, ịkụ ala laser ...
JCZ 3D laser na-ebi akwụkwọ ngwanrọ ngwọta dị maka SLA, SLS, SLM, na ụdị 3D 3D prototyping ọzọ maka SLA, anyị ahaziri ngwanrọ ahaziri akpọ JCZ-3DP-SLA. Ọbá akwụkwọ ngwanrọ na koodu iyi nke JCZ-3DP-SLA dịkwa. Maka SLS na SLM, ọba akwụkwọ sọftụwia 3D dị maka ndị na-ahụ maka sistemụ iji mepụta sọftụwia 3D obibi nke ha.
EZCAD ngwa mmepe sọftụwia / API maka EZCAD2 na EZCAD3 dị ugbu a, imirikiti ọrụ nke EZCAD2 na EZCAD3 ka emepere emepe maka ndị na - emekọ ihe n’usoro iji hazie sọftụwia pụrụ iche maka ngwa a kapịrị ọnụ, yana ikikere ndụ ha niile.
Na-elekwasị anya na Lens
Laser Resistor trimming igwe atTS4410F-C50
Sistemụ Mgbawa Laser
Beijing JCZ Technology Co., Ltd, nke a maara dị ka JCZ hiwere na 2004. Ọ bụ ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ a ma ama, raara nye nnyefe ọkụ laser na njikwa metụtara nyocha, mmepe, imepụta, na mwekota. N'akụkụ ya isi ngwaahịa EZCAD laser akara usoro, nke bụ na-eduga ọnọdụ na ahịa ma na China na mba ọzọ, JCZ na-n'ichepụta na-ekesa dị iche iche laser metụtara ngwaahịa na ngwọta maka uwa laser usoro integrators dị ka laser software, laser njikwa, laser galvo nyocha, laser iyi, laser optic…
Ruo afọ 2019, anyị nwere ndị otu 178, ihe karịrị 80% n'ime ha bụ ndị ọrụ aka ọrụ na-arụ ọrụ na ngalaba R & D na ngalaba na-ahụ maka teknụzụ, na-enye ngwaahịa ndị a tụkwasịrị obi na nkwado teknụzụ na-anabata.
Ịdị mma Dị elu Ọrụ Otu-nkwụsị Ọnụahịa asọmpi
Ngwaahịa niile nke JCZ rụpụtara ma ọ bụ ndị mmekọ ya gosipụtara na ndị ọrụ JCZ R&D ma nyocha ya nke ọma site n'aka ndị nyocha iji jide n'aka na ngwaahịa niile rutere na saịtị ndị ahịa enweghị ntụpọ.
Ihe kariri ọkara nke ndị ọrụ na JCZ na-arụ ọrụ dị ka R&D na ndị injinia na-akwado teknụzụ na-enye ndị ahịa nkwado zuru ụwa ọnụ. Site na elekere asatọ nke ụtụtụ ruo elekere mbụ nke 11 nke ụtụtụ, site na Mọnde ruo Satọde, naanị injinia nkwado gị dị.
Ọnụahịa ngwugwu asọmpi
JCZ bụ onye na - ekenye ma ọ bụ na - emekọrịta ihe na ndị na - ebubata ya. Ọ bụ ya mere na anyị nwere nanị ọnụahịa na-eri nwekwara ike belata ma ọ bụrụ na ndị ahịa na-azụ dị ka a ngwugwu.